Sazi futhi ukuthi sebegqilazwe isikhathi eside bengatholi imihlomulo edingekayo. Somlomo sake sakhuluma ngonogada nabasebenzi basendlini nabasebenza futhi emapulazini kanye nabasebenza emigodini nabanye abaqashiwe abangaholi kahle ukuthi bodinga ukubhekelelwa.
Siqonde futhi Somlomo ukuthi umthetho yinto eqhubekayo ehambayo. Kuyoba khona isikhathi lapho kubuye kuchitshiyelwe khona ukuze kuqhutshekwe kulungiswe izimfuno zabantu bakithi bathole ukusizakala ezweni lakithi. Sazi ukuthi kufanele bavikelwe abasebenzi laba abasebenza emapulazini ngokuxhashazwa kwabo kanye nalabo abangabalimi bavikelwe ukuze nabo bangalinyazwa abasebenzi bakwazi ukuthola imihlomulo okuyiyona yona.
Sisasho kuthi ke siyakwemukela lokhu Somlomo siqonde ukuthi izwe lakithi lisathuthuka. Uyadingeka umhlaba, ziyadingeka izibhedlela nezikole nemitholampilo nakho konke, zonke lezi zinto kufanele zenziwe ezweni lakithi sakhile. Ukwakha indaba yomsebenzi kufanele siyiqhathanise nendaba yokudala amathuba emisebenzi ukuze abantu bakithi basizakale.